Dhageyso: Tacliinta iyo Jaceylka iyo aragtida dhalinyarada | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Dhageyso: Tacliinta iyo Jaceylka iyo aragtida dhalinyarada
Posted by: radio himilo February 26, 2017
Muqdisho – Waxay yiraahdeen jaceylku malahan xad iyo soohdin. Ma yaqaan caddaan iyo madow. Ma qoro sabool iyo tanaad. Mana ku sargo’na kuf iyo gayaan.
Previous: Islaan 82-jirta iyo wiil 28-jir ah oo is guursaday jaceyl kadib